बहिनीबाट प्राप्त रिपोर्टपछि किन खुशी भए किम जोङ उन?
HOME » बहिनीबाट प्राप्त रिपोर्टपछि किन खुशी भए किम जोङ उन?
बीबीसी। उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले आफू दक्षिण कोरियासँगको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने पक्षमा रहेको बताएका छन्।
उनले शान्ति वहाली गर्न दक्षिण कोरियाले गरेको सम्पूर्ण कोसिसको प्रशंसा समेत गरेका छन्। बीबीसीका अनुसार किम जोङ उनको सो अभिव्यक्ति दक्षिण कोरियाबाट स्वदेश फर्किको उत्तर कोरियाली प्रतिनिधिमण्डलको रिपोर्ट बुझेपछि आएको हो।
सो प्रतिनिधिमण्डलमा किमकी बहिनी किम यो जोङ पनि सहभागी थिइन्। जसले प्योङचाङमा जारी ओलम्पिक खेलको उद्घाटन समारोहमा भाग लिएकी थिइन्।
दक्षिण र उत्तर कोरियाली नेताबीच भेटवार्ता
यद्यपी समाचार एजेन्सीको रिपोर्टमा किम जोङ उनले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जे इनलाई वार्ताकालागि उत्तर कोरियाको राजधानी प्योङयाङ आउने निमन्त्रणा दिएको उल्लेख छैन। ओलम्पिक खेलको सुरुवातमा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उनले दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपति मुन जेइ इनलाई उत्तर कोरियाको भ्रमणको निम्ता दिएको समाचार बाहिर आएको थियो।
उता अमेरिकाले भने उत्तर कोरियासँग नजिकको सम्बन्ध नबढाउन दक्षिण कोरियालाई चेतावनी दिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासनले उत्तर कोरियाले आफ्नो परमाणु कार्यक्रम जारी राखेको अवस्थामा शीतकालीन ओलम्पिकमा दक्षिण कोरियाले सतर्कता अपनाउन चेतावनी दिएको थियो।